खोज इञ्जिन अनुकूलन - Semalt विशेषज्ञ
एसईओ को रूप मा परिचित खोज इञ्जिन अनुकूलन एक वेबसाइट खोज जैविक परिणामहरु को दृश्यता को हेरफेर को संदर्भ छ। Semalt विशेषज्ञ, एन्ड्र्यू डायहान, तपाइँलाई निम्न एसईओ कार्यहरू हेर्नको लागि प्रस्ताव गर्दछ:
HTML को सम्पादन
कोडि Ed सम्पादन गर्दै
प्रमुख खोजी इञ्जिनहरूका उदाहरणहरू याहू, गुगल, र बिंग हुन्, जसले हाल मोबाइल खोजीको एसईओ रणनीति प्रयोग गर्दछ। यी ईन्जिनहरूले क्रॉलरहरू प्रयोग गर्छन् जुन अन्य खोज इन्जिनहरूका अनुक्रमणिका पृष्ठहरूमा लिंक भएका पृष्ठहरू फेला पार्न सक्षम छन्।
खोज ईन्जिनहरूको अनुक्रमणिका
खोज ईन्जिनहरू जुन अनुक्रमित हुन्छन् उनीहरू भन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दछ। खोजी ईन्जिनहरूको उदाहरणहरू बन्द गरिएका थिए किनभने तिनीहरूलाई म्यानुअल सबमिशन आवश्यक छ र सम्पादकीयको लागि मानवीय समीक्षाको लागि DMOZ र याहू निर्देशिका हो। अनुक्रमित खोज ईन्जिनको उदाहरण गुगल हो जसले गुगल सर्च कन्सोल प्रयोग गर्दछ जसमा XML साइटम्याप फिडहरू सिर्जना र सबमिशन समावेश छ। यसले सबै पृष्ठहरू फेला पार्न अनुमति दिन्छ, स्वचालित रूपमा निम्न लिंकहरू द्वारा पत्ता लगाउन नसकिने ती पनि।
अवांछनीय सामग्री प्रोफेशल वेबमास्टर्स द्वारा खोजी अनुक्रमणिकामा पुग्न रोक्न सकिन्छ जुन माकुरा फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि जिम्मेवार छ। यो एक robots.txt फाईलद्वारा गरिन्छ जुन डोमेनमा मूल निर्देशिकामा रहेको छ। कार्यक्षमता वृद्धि गर्न रोबोट.टक्सट फाइलमा एक मेटा ट्याग पनि थपिएको छ।
कसरी एउटा वेब पृष्ठ प्रख्यातता बढाउन?
वेब पृष्ठ प्रख्यातता विभिन्न तरीकाहरूमा बढाउन सकिन्छ:
प्रासंगिक कुञ्जीपाटी भएको सामग्रीको प्रयोग
सामग्रीको लगातार अपडेट
वेबसाइटको मेटा डाटामा केहि प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको थप
URL को सामान्यीकरण
क्यानोनिकल लिंक तत्वको प्रयोग
SEO ले प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ जुन ब्ल्याक ह्याट, व्हाइट ह्याट र खरानी टोपी नाम गरेको तीन समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ। ह्वाइट ह्याट टेक्निकले परिणामहरू प्रदान गर्दछ जुन लामो समयसम्म रहन्छ जबकि ब्ल्याक ह्याट टेक्निकले परिणामहरू उत्पादन गर्दछ जुन छोटो अवधिको लागि रहन्छ। यसका साथै, एक सेतो टोपी प्रविधि वैध हो जबकि कालो ह्याट प्राविधिक अवैधानिक हो। खरानी टोपी प्रविधि कालो र सेतो टोपी प्रविधिहरूको संयोजन हो। यो मुख्य रूपमा वेबसाइट र्यान्कमा सुधार गर्नुको सट्टा सभ्य सामग्रीको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्ने आधारमा।
वास्तवमा, SEO एक प्रभावी उपकरण हो! जे होस्, यो प्रत्येक वेबसाइट को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक साइट र यसको कोठा र लक्ष्यमा निर्भर गर्दै, कहिलेकाँही भुक्तान गरिएको विज्ञापन अभियान जस्तै विशेष इन्टरनेट मार्केटिंग रणनीतिहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। एसईओ र एसईएम बीच अत्यन्त भिन्नता खोज परिणामहरूको रैंकिंग प्राथमिकता हो, जुन कि त कि त भुक्तान वा ज्याला नै लिन सकिन्छ। एक SEM प्रमुखता उन्मुख छ जबकि एसईओ प्रासंगिकता उन्मुख छ।
अक्टूबर २००२ मा गुगलले सर्चकि by्ग द्वारा दावी गरिएको थियो कि गुगलले हस्तक्षेप गर्‍यो। सर्चकिing्गले दावी गर्‍यो कि गुगलले स्पामडेक्सिंग रोक्न यो काम गरेको थियो। यद्यपि केस २०० 2003 मा खारेज भयो किनभने सर्चकिing एक दावी बताउन असफल भयो।